उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्दा ५.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प!::KhojOnline.com
उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्दा ५.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प!
उत्तर कोरियाले बुधबार हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजनले आजको परीक्षण सफल भएको र देशको आणविक शक्ति अर्को चरण प्रवेश गरेको बताएको छ।
आसपासका क्षेत्रमा बुधबार बिहान ५.१ म्याग्नेच्युडको भूकम्पको धक्का महशुस गरिएकाले पनि उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको हुन सक्ने दक्षिण कोरिया र जापानका अधिकारीले बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाको मौसम विभागले पनि बिहानको भूकम्प मानवनिर्मित हुन सक्ने बताएको छ।
उत्तर कोरियाले सन् २००६ यता तीन पटक यस्ता परीक्षण गरिसकेको छ। सन् २००६ मा यस्तो परीक्षण गर्दा ३.७, सन् २००९ मा ४.५ र सन् २०१३ मा ४.९ म्याग्नेच्युडको भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको समाचार संस्था एन्होपले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारमा सलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था
१७ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले मालपोत र नापी कार्यालयहरुम्ाा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको रहेको स्वीकार गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा सलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘काठमाडौंको गोट्ठारमा रहेको ४० रोपनी जग्गा कर्मचारीले...